जीतकाे खुशी साट्नै लागेका बेला कार दुर्घटनामा गुमाएका श्रीमति र छोरी सम्झेर भावुक बने! – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > जीतकाे खुशी साट्नै लागेका बेला कार दुर्घटनामा गुमाएका श्रीमति र छोरी सम्झेर भावुक बने!
admin November 8, 2020 November 8, 2020 अन्तराष्ट्रिय	0
अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन निर्वाचित भएका छन्। रिपव्लिकन पार्टीका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पलाई हराउँदै अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपतिमा बाइडेन निर्वाचित भएका हन्। सिएनएनले पेन्सिलभेनिया राज्यमा उनले जितेको प्रोजेक्सन गर्दै बाइडेनले निर्वाचन जितेको जनाएको छ। सन् १९०० यता सबैभन्दा बढी मतदान भएको निर्वाचनमा बाइडनले सात करोड ३० लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका छन् जुन कुनैपनि अमेरिकी राष्ट्रपतिले हालसम्म प्राप्त गरेको मतभन्दा बढी हो।
ट्रम्पको लगभग सात करोड छ जुन इतिहासमै राष्ट्रपतीय उम्मेदवारले पाएको दोस्रो ठूलो मतसङ्ख्या हो। मतगणना जारी रहँदा ट्रम्पले आफूले जितेको गलत दाबी गरेका थिए । त्यसपछि उनले दैनिक धाँधली भएको दाबी गरिरहेका छन् तर उनले कुनै प्रमाण दिएका छैनन्। उनको पक्षबाट केही राज्यहरूमा मुद्दा दायर गरिएको छ र शुक्रवार बाइडनले जित्ने सम्भावना देखिएपछि ‘यो निर्वाचन अन्त्य नभएको’ विज्ञप्ति निकालिएको छ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि राष्ट्रव्यापी परीक्षण र ट्रेसिङ कार्यक्रम, रोजगारीमा न्युनतम आय बढाउने, साना उद्योगहरुलाई दिइने ऋण बिस्तार गर्ने, न्याय प्रणालीमा सुधार ल्याउने, अल्पसंख्यक समुदायका लागि व्यवसायमा सहयोग गर्ने, हरित उर्जामा लगानी बढाउने, पेरिस जलवायु सम्झौतामा पुनरागमन गर्ने । सिएनएनले पेन्सिलभेनिया राज्यमा उनले जितेको प्रोजेक्सन गर्दै बाइडेनले निर्वाचन जितेको जनाएको छ।
कृत्रिम हुँदैन,” पूर्वविदेशमन्त्री तथा राष्ट्रपतिका पूर्वउम्मेदवार जन केरीले द न्यूयोर्कर पत्रिकालाई बताए।तर उनको स्पर्श गर्ने बानीलाई लिएर कतिपय प्रश्न उठेका छन् । बाइडन अन्य राजनीतिज्ञभन्दा सर्वसाधारण जनतानिकट देखिनुमा एउटा कारण भनेको अरूले जस्तै उनले बेहोरेका पारिवारिक शोक हुनसक्छ।
सिनेटमा पहिलो चुनाव जितेपछि शपथ लिने तयारी गर्दै गर्दा भएको कार दुर्घटनामा उनको पत्नी नेलिया र छोरी नाओमीको ज्यान गएको थियो भने दुई छोरा बो र हन्टर घाइते भएका थिए। सन् २०१५ मा ४६ वर्षको उमेरमा मस्तिष्कमा ट्यूमरका कारण उनका छोरा बो बाइडनको निधन भयो।